Tsy afa-mihetsika rehefa matory, tsindrin’ny mpamosavy tokoa ve
Rehefa ao anaty torimaso iny no toa mahatsiaro tena tampoka, saingy tsy afa-miteny sy tsy afa-mihetsika nefa tonga saina, dia lazain’ny Malagasy foana fa voatsindrin’ny mpamosavy. Voaporofo anefa ny tsy fahamarinan’izany. Nambaran’ny mpikaroka avy ao amin’ny oniversite Penn State ao Pennsylvannie, fa “paralysie du sommeil” no mahazo ireny olona ireny. Tsy tokony hampatahotra, hoy ireo […]
Aretin’andoha : tokony fantarina ny antony
Dia faly miarahaba antsika izay mpanaraka tsy tapaka ny Conseil ET Partage Androany dia hampahalalana antsika izany hoe loha marary izany, na « maux de tête », ary ho tohizantsika amin’ny « Migraine » izany fampahalalana izany amin’ny heriny anio toy izao. “Maux de tête intracraniens” Iza amintsika moa no tsy nandalo tao anatin’izany […]
« Fibrome », mety hampiraikitra tsinay
Karazana fivontosana kely, mety hahazo ny vehivavy rehetra, indrindra ireo vehivavy mainty hoditra, ny “fibrome”. Tsiry mpanentana, amin’ny ankapobeny, no mahatonga azy hiforona. Matetika ihany koa dia ireo vehivavy efa nahazoazo taona no tena hisehoan’ireo tranga manelingelina vokatry ny “fibrome”. Tsy voatery ho esorina na hodidiana foana ny “fibrome”. Raha tsy manelingelina ny fitondrana vohoka […]
Ranomasina : Ny tombotsoany
Ankoatry ny fihariana sy ny sakafo dia misy tombotsoa maro azontsika amin’ny ranomasina. Efa misy fikarohana any ny hamadihana azy ho rano fisotro madio, ao koa ny hamadihana azy ho angovo. Ny tombony ara-pahasalamana no asiana resaka. 1) ny filomanosana 12-15 minitra isan’andro dia efa azahoana mineraly ho an’ny vatana mivantana. Mihalehibe ny hirika kely […]
Ny fary manadio voa
Ny fary indray no ho resahintsika kely anio. * Manadio ny nify ny fihinanana (fifihana) fary. Tsy mba niborosy nify ny olona taloha fa amin’ny alalan’ny famaohana ny nify @zoron-damba matetika no fahita. Rehefa matoy ny fary dia io indray no entin’izy ireo anadiovana ny nify. Fotsy botsiaka aok’izany ny nify rehefa avy mifiaka fary. […]
Fitandremana 7 mahasalama ny lehilahy
Harena ny fahasalamana ary tsy mifidy olona fa na lahy na vavy, na mbola kely na efa lehibe, dia tokony hitandri-tena avokoa mba ho salama tsara. Ho an’ny lehilahy manokana ohatra dia misy ireo fihetsika tokony arahina, manomboka amin’ny faha-15 taonany hatramin’ny faha-75 taonany, hisorohana ny fihavian’ireo aretina Mijery vihy : 15 taona hatramin’ny […]
Maodelin-tsakafon’ny zaza 6 volana – 12 volana
Enim-bolana eo ny zaza malagasy no omena ventin-kanina sy sakafo, ankoatra ny ronono. Mandrapahatonga azy ho 12 volana dia ampidirina tsikelikely, arakaraky ny sokajiny izany sakafo izany, mba hitaizana sy hanazarana ny vavony keliny. Mila hay tsara ny manavaka ny sakafo ampidirina, ny fatrany, ny ora fanomezana azy … mba ho salama tsara sady […]
Marobe ny vokatsoa azontsika amin’ny fisotroana ny ranom-boanio
NY RANOM-BOANIO Mitondra sokay, vitamina C, vitamina B isankarazany, potasioma, manezioma, ioda, sofra. Otrikaina ilain’ny vatana daholo ireo. Ny tsy fahampian’ny potasioma ohatra no nampiakatra ny tosi-dra ka tsara ny misotro ranom-boanio – manala hetaheta, mampisy tahirin-drano ho an’ny vatana – manampy amin’ny fandevonan-kanina – manala ny famaivain’ny vavon’ny vehivavy bevohoka, manala fitohanana (constipation) – […]
Fa inona ary ny asany eo amin’ny vatantsika?
Hitanao ao amin’ny SAKAFO ireo vitamines rehetra fa inona ary ny asany eo amin’ny vatantsika? VITAMINES A mahatsara ny fahitana, manafaingana fahasitranan’ny hoditra, miaro ny hoditra amin’ny mony, manampy amin’ny fitomboana ara-batana, manamafy ny taolana, manatsara ny hoditra ary mahatsara ny volo … VITAMINES B1 manampy amin’ny fiasan’ny selan(ny ati-doha VITAMINES B2 mitana ny hatsaran’ny […]
VONONA NY HITERAKA AHO
Vohoka Alohan’ny hiterahana ny vehivavy dia betsaka no tokony fiomanana atao na ara-batana izany na ara-tsaina ary mazava ho azy ara-bola ihany koa. Ny amin’ny ara-batana dia tokony mihoatra ny 20 taona eo ho eo farafaha-keliny, amin’io mantsy no tomombana tsara daholo ny fitomboana sy ny fahamatoan’ny taova rehetra ilaina amin’ny fiterahana dia ny taovam-pananahana […]